]Chocolate Confectionery Equipment Machine Nrụpụta | Yinrich
Line Production Candy siri ike
Ahịrị nkwụnye ego swiiti siri ike
Ahịrị na-emepụta swiiti siri ike
Ahịrị mmepụta Lollipop
Ahịrị nkwụnye ego Lollipop
Ahịrị na-eme Lollipop anwụ anwụ
Igwe na-emepụta Lollipop na-egbu egbu & ihe mkpuchi
Ahịrị nkwụnye ego Toffe
Soft Candy Die-akpụ Line
Igwe na-egbutu swiiti chewy na kechie
Line Production Jelly Candy
Ahịrị nkwụnye ego Jelly Candy
Igwe Jelly Mogul
Ahịrị Marshmallow echekwabara
Line Marshmallow Extruded
Ahịrị chịngọm na-ata ahụhụ
Ụdị Ohiri isi na-ata ahịrị ahịrị
Ahịrị chịngọm ụdị oghere
Sistemu ịtụ atụ akpaaka(aws)
Sistemụ Mgbasa ngwa ngwa (rd)
Igwe ọkụ ọkụ (fcc)
Rotor osi nri (rt)
Ihe nkiri ihe nkiri dị mkpa (bm)
Ngalaba na-esi nri oghere-maara ihe(bjc)
Jelii/Marshmallow Cooker na-aga n'ihu (cjc)
Ihe esi nri ikuku ụwa niile (tc)
Belt jụrụ oyi (scb)
Ahịrị ịkpụzi chocolate
Igwe na-egbochi Chocolate
Igwe na-ejuputa biscuit
Igwe Sanwichi (kuki Capper)
Macaron na-ejuputa na igwe capping
Igwe ngwunye swiiti
Ikpe na-aga nke ọma
Ọrụ Mgbe ire ere& Akwụkwọ ikike
Onye mmekọ ntụkwasị obi gị na Swiiti, Choco & Bakery Industry
Ngwá ọrụ confectionery bụ eriri mgbakọ maka mmepụta swiiti. Yinrich bụ ọkachamara na-emepụta ihe eji eme nri na china, nwere igwe mkpuchi chọkọleti, ngwa confectionery azụmahịa maka ọrịre. Igwe confectionery anyị bụ ọkachamara nke ukwuu, ejiri ngwa nri confectionery, ngwa nhazi confectionery, ngwa nkwakọ ngwaahịa confectionery, wdg.
Ahịrị nkwụnye ego swiiti jelii
]Ezubere usoro GDQ nke YINRICH maka ịme candies jelii na-abụghị starch, ikike sitere na 70kgs/h ruo 500kgs/h. Ihe mmetụ aka HMI maka ịrụ ọrụ dị mfe; Nfuli dosing maka ntinye akpaaka nke agba, ekpomeekpo na acid; Enwere ike ịme eriri nwere agba abụọ, agba abụọ nwere okpukpu abụọ, ndochi etiti, na swiiti jelii larịị nwere ike ịme n'ahịrị a. Ọ bụ mmemme PLC na-achịkwa nkwụnye ego na-ebugharị servo.
Ahịrị marshmallow extruded
]Igwe usoro EM bụ igwe ikuku nke YINRICH na-ekupu oke, wee kewaa ya n'ọtụtụ iyi. A ga-agbanye ire ụtọ na agba na iyi ọ bụla. Mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike ịmepụta ụdị ngwaahịa dị iche iche mara mma na extruder pụrụ iche nke YINRICH, dị ka otu agba, agba agba agba, agba agba 4, na ọbụna ngwaahịa extruded jupụtara n'etiti.
]E mepụtara usoro GDL nke YINRICH maka ịme lollipops echekwabara, ikike site na 120kgs/h ruo 500kgs/h. Ihe mmetụ aka HMI maka ịrụ ọrụ dị mfe; Nfuli dosing maka ntinye akpaaka nke agba, ekpomeekpo na acid; Enwere ike ime eriri nwere agba abụọ, agba abụọ nwere okpukpu abụọ, ndochi etiti yana lollipop doro anya n'ahịrị a. Ọ bụ mmemme PLC na-achịkwa nkwụnye ego na-ebugharị servo. Sistemụ ntinye mkpanaka akpaaka dị.
Igwe Sanwichi (Cookie Capper)
]Vidiyo a bụ igwe Sanwichi (ihe mkpuchi kuki) nke Yinrich mere, nke bụ ahịrị mgbakọ kuki, igwe kuki Sanwichi. Yinrich bụ ọkachamaraemeputa akụrụngwa confectionery. N'otu oge ahụ, ọ na-enyekwa igwe Sanwichi dị iche iche (cookie capper) na igwe bisikiiti ude maka ụlọ ọrụ na-emepụta kuki.Nke a JXJ usoro Sanwichi igwe (kuki capper) nwere ike jikọọ na mpụta ebufe nke kuki na-eme ihe ọkụkụ, na ọ nwere ike na-akpaghị aka kwado, nkwụnye ego na okpu na ọsọ nke 300 ahịrị kuki (150 ahịrị nke sandwiches) kwa nkeji. Ụdị bisikiiti dị nro na nke siri ike dị iche iche, achịcha nwere ike isi na igwe Sanwichi (cookie capper). Enwere ike inye ya nri site na ntinye akwụkwọ akụkọ biscuit na usoro ntinye aha. Igwe kuki Sanwichi ahụ na-ahazi, na-akwakọba, na-emekọrịta ngwaahịa ndị ahụ, na-etinye ego zuru oke nke ndochi, wee kpuchie elu ya na ngwaahịa ahụ. A na-ebuga sanwichi ndị ahụ na-akpaghị aka na igwe mkpuchi, ma ọ bụ na igwe mkpuchi maka usoro ọzọ. Otu a ka igwe Sanwichi (cookie capper) si ahazi bisikiiti.Nkọwa nka na ụzụ isi nke ahịrị Mgbakọ kuki:Ike mmepụta: appro.14400 ~ 21600 sandwiches / minMmepụta iberibe iberibe: 30 pcs/minNdị isi nkwụnye ego: 6 ruo 8Isi mkpuchi kuki: 6 ruo 8Ike: 380V/12KWOgologo eriri: 800mmAkụkụ: L: 5800 xW: 1000 x H: 1800mm
AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHICHE
Ruo ugbu a, YINRICH enyela ndị ahịa anyị ihe karịrị mba na mpaghara 60 n'ụwa niile igwe chọkọleti, akụrụngwa na-edozi ihe ụtọ, ngwa nkwakọ ngwaahịa confectionery na ngwa ndị ọzọ. YINRICH arụnyere ma rụchaa ihe karịrị ahịrị mmepụta 200 na akụrụngwa confectionery, wee guzobe ụgbọ mmiri ogologo oge na ndị ahịa anyị. Anyị ji obi eziokwu na-ekele n'okpuru ndị mmekọ anyị (enweghị ike ịdepụta ihe niile):
YINRICH® bụ onye na-eduzi na ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị elu, igwe na-emepụta chocolate na ebe a na-eme achịcha na nkwakọ ngwaahịa, nke nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Shanghai, China. Dị ka ụlọ ọrụ kachasị elu maka ngwa chọkọleti na ihe oriri na-atọ ụtọ na China.
YINRICH na-arụpụta ma na-enye ngwá ọrụ dị iche iche maka ụlọ ọrụ chocolate na confectionery, sitere na otu igwe iji mechaa ahịrị turnkey, ọ bụghị naanị ngwá ọrụ confectionery azụmahịa dị elu na ọnụ ahịa asọmpi, kama ọ bụ usoro akụ na ụba na nke dị elu nke usoro ngwọta dum maka confectionery. na mmepụta chocolate.
Anyị na-enye imewe, mmepụta, na mgbakọ nke obere na ọkara confectionery ngwá na chocolate ime ahịrị dị ka ndị ahịa kpọmkwem chọrọ.